Messi Miyuu U Dhaqaaqayaa Horyaalka MLS-ka Mareykanka? – Milkiilaha Inter Miami Ayaa Ka Jawaabaya. – Garsoore Sports
Messi Miyuu U…
Messi Miyuu U Dhaqaaqayaa Horyaalka MLS-ka Mareykanka? – Milkiilaha Inter Miami Ayaa Ka Jawaabaya.
Milkiilaha kooxda Inter Miami Jorge Mas ayaa ku rajo weyn in Lionel Messi uu maalin uun ku biiri doono kooxdiisa.
Lionel Messi ayaa ku qaadan karaya maalmihii ugu dambeeyay waayihiisa ciyaareed kooxda Inter Miami ee ka ciyaarta horyaalka Mareykanka ee Major League Soccer – ugu yaraan, milkiilaha kooxdaasu ayaa ku rajo weyn in heshiiskaasi la diyaarin karo.
Mustaqbalka Messi ayaa mugdi ku jira waayaadan, iyadoo xiddiga lixda jeer ee ku guulleeystay abaalmarinta Ballon d’Or uu isku dayay inuu qasbo inuu ka tago Barcelona bishii Ogosto ee lasoo dhaafay.
Inkastoo taasi aysan mira dhal noqonin, iyadoo Messi uusan dooneyn inuu kooxda ku dhex jiido maxkamadaha isagoo isku dayay inuu qaab dublumaasiyadeed uu kaga tago kooxda uu jeceelka aadka ahi u qabo ee Barcelona.
Mustaqbalka Lionel Messi wuxuu ahaa warka joogtada ah ee la isla dhexmarayo saxaafadda taniyo billoosgii ololaha 2020-21 maadaama qandaraaskiisa uu dhacayo. dhammaadka Juun bishaan aan ku jirno ee Juun.
Madaxweynaha Barca Joan Laporta ayaa sheegay bishaan in wadahadalada qandaraaska ay si wanaagsan u socdaan, iyadoo Messi uu umuuqdo inuu ku faraxsan yahay kooxda tan iyo markii uu is casilay bishii October madaxweynihii hore ee Josep Maria Bartomeu.
Inkastoo u dhaqaaqista Inter Miami ay u muuqato mid aan macquul ahayn xilligan iyada oo aan loo eegin xiriirka Messi iyo Barca, Jorge Mas, oo milkiile ka ah kooxda MLS, uma muuqato sabab uusan heshiis u suurta geli karin mustaqbalka.
“Waxaan ku rajo weynahay in Messi uu ku ciyaari doono funaanada Inter Miami sababtoo ah waxaan u maleynayaa inay dhameystiri doonto dhaxalka ciyaariyahankii ugu weynaa jiilkeena wuxuuna la kulmi doonaa hamiga milkiilayaasha Inter Miami si ay u dhisaan koox heer caalami ah, ”Mas ayaa u sheegay Miami. Herald.
Xiddigii hore ee Real Madrid, Manchester United iyo England David Beckham ayaa qayb kaleh horyaalka Mareykanka ee loo yaqaan ‘MLS’ sidoo kale wuxuu ka yahay madaxweyne.
Mas ayaa sheegay in isaga iyo Beckham ay leeyihiin himilooyin gaar ah oo ku saabsan heerka ciyaaryahan ee ay doonayaan inay ku arkaan Florida.
Wuxuu intaas ku daray: “aniga iyo David si adag ayaan u shaqeynay, waxaan hami ka qabnaa inaan halkaan keenno ciyaartoyda ugu fiican, Messi waa cayaaryahanka ugu fiican jiilkan, oo la dhihi karo waa ciyaariyahanka ugu fiican abid.”
Barcelona Oo Iska Iibineysa Qaar Kamid Ah Xiddigaheeda Si Ay U Hesho Raheem Sterling
Macalinkii Hore Ee Liverpool Oo Ku Biiraya Koox Ay Xafiiltamaan Kooxdiisii Hore